Announcement – Yezin Agricultural University | Official Website
Division of Postharvest Technology
Yezin Agricultural University, Demonstrator Result
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် နည်းပြ၊ သရုပ်ပြနှင့် ဒုတိယ ဦးစီးမှူး ရာထူးခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ စာရင်း ကြေညာချက် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် Facebook Page တွင်လည်း ကြည့်နိုင်ပါသည်။ https://web.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity
First Yr, Entrance
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် တတိယအကြိမ် ထပ်မံတိုးမြှင့် ဝင်ခွင့်ရရှိသူ ကျောင်းသား (၂၅) ဦး နှင့် ကျောင်းသူ (၃၄) ဦး ၏ အမည်စာရင်း ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။ ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက်မှာ(၂၆-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။
Announcement for 29th Convocation Ceremony
Post Graduate Result
Announcement for Tutor, Demonstrator and Deputy Head of Section Written Result
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် နည်းပြ၊ သရုပ်ပြ နှင့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း Download File Here
Final Year Result (2018-2019 Academic Year)
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော နောက်ဆုံးနှစ် (B.Agr.Sc.) ဘွဲ့ စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း Download File Here
Third Year (Semester V) (B.Agr.Sc.) Entrance Announcement for (T)
(၄၃) ကြိမ်မြောက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူများ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားရန်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၄၃)ကြိမ်မြောက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ဤတက္ကသိုလ်သို့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် တတိယနှစ် (Semester V) (B.Agr.Sc.) သင်တန်းသို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်ကြေး၊ ကျောင်းလခနှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေးများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့ထိ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Download File Here
Third Year (Semester V) (B.Agr.Sc.) Entrance Announcement for (OD)
(၄၃) ကြိမ်မြောက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာအောင်မြင်ပြီး ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှဝန်ထမ်းများ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားရန်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၄၃)ကြိမ်မြောက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ဤတက္ကသိုလ်သို့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် တတိယနှစ် (Semester V) (B.Agr.Sc.) သင်တန်းသို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်ကြေး၊ ကျောင်းလခနှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေးများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့ထိ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Download File Here
Call for Staff Mobility for Teaching
Call for Student Mobility for Studies
Total Visit : 21240
Post Code: 15013, Yezin, Zayathiri Township, Naypyitaw, Myanmar.